Fotoam-pitsarana: hanomboka ny alatsinainy izao | NewsMada
Hisokatra manomboka ny alatsinainy izao ny fotoam-pitsarana ny raharaha rehetra eny anivon’ny lapan’ny Fitsarana Anosy. « Telo andro mialohan’ny fotoam-pitsarana iray no atao peta-drindrina eo amin’ny tokotanin’ny lapan’ny Fitsarana ny laharana sy ny anaran’ireo olona manana raharaham-pitsarana », hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray. Hita ao avokoa ireo raharaha rehetra mandeha amin’ny fotoam-pitsarana iray. Izay ahitana ny laharan’ny antontan-taratasy sy ny olona voakasik’izany. Tsy maintsy manaraka ireo laharana ireo ny olona rehetra, araka ny lalàna napetraky ny fitondram-panjakana amin’ny fisorohana ny Covid-19. « Tsy maintsy olona miisa 50 ihany no mahazo miditra ao anatin’ny efitrano fitsarana iray », hoy ny fanazavan’ny mpisolovava Herinatrehina Elia, lehiben’ny firaketan-draharaha eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany. Nohamafisiny fa ireo dosie misy mpisolovava no handeha mialoha.
Nivangongo ny antontan-taratasy
Nivangongo ny raharaham-pitsarana, nandritra izay telo volana fihibohana izay, teny amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany. Nahatratra 200 ka hatramin’ny 300 ny antontan-taratasy noraisin’ny mpitsara. « Ireo ady maika no tena nandeha teto anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny fitsarana ambony », hoy hatrany ny fanazavan’ilay lehiben’ny mpirakidraharaha.
Noferana ho 15 isa kosa ireo antontan-taratasy raisina ho an’ny fitsarana ambaratonga ambony. Ireo raharaham-pitsarana tsy misy voafonja no handeha mba hiarovana ireo voafonja amin’ny tsimokaretina. « Hisy ny fandefasana ireo dosie halefa hotsaraina mahakasika ireo voalaza ireo ka noferana ho 15 isa isaky ny audience ny eo anivon’ny cours d’appel ankoatra ireo izay efa hamoahana didim-pitsarana. », hoy ny mpisolo vava Raolihasindrahona Aimée, lehiben’ny fiaraketan-draharaha eo amin’ny fitsarana ambony.
Mbola mitsahatra ny Fitsarana ady heloka bevava amin’izao ho fiarovana ny Covid-19.
Ho hentitra koa ny lapan’ny Fitsarana amin’ny fivezivezena eny an-toerana. Misy ny fakana ny mari-pana, ny fanasana tanana amin’ny rano sy savony ary ny fanajana ny iray metatra. Ireo izay misy ny soritr’aretina kosa tsy ho tafiditra ao amin’ny lapan’ny Fitsarana mihitsy.